4 Amathiphu Wokubeka Izinjongo Zokuqina Kokuqina | Isitolo se-SARM
Amathiphu ama-4 wokubeka izinjongo ze-Smart Fitness
Ukubeka imigomo ngesinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani abasebenzisi bejimu bakuthola kulula ukusebenza nomqeqeshi noma umqeqeshi womzimba - kungaba nzima ukwazi imikhawulo yakho lapho ufika ezinhlosweni zokufaneleka. Ukubeka izinhloso zokuqina kwe-SMART kungadida kakhulu futhi kukhungathekise kakhulu uma ungazi ukuthi uzoqala ngaphi, futhi kumane akulula njengokusho ukuthi ufuna ukugijima imarathon noma uthole i-rock solid solid.
Manje uyini umgomo wokuqina we-SMART?
Izinhloso ze-SMART ziyindlela elula yokuqinisekisa ukuthi izinhloso zakho ziyafinyeleleka futhi zihambisana nohambo lwakho lokuqina lomzimba olude. Noma ngabe ufuna ukuzibekela imigomo noma ungumqeqeshi ozifunela ukusiza iklayenti, ukuqinisekisa ukuthi uzibekela imigomo yokuqina ye-SMART kuzosho ukuthi unemigomo efinyelelekayo, ongayifinyelela ongasebenza kuyo. Ukuzibekela imigomo yokuzivocavoca akugcini ngokukukhuthaza kodwa kubalulekile ekuqhubekeni nasekuthuthukiseni.
Ungasebenzisa ithempulethi yezinjongo ze-SMART ngokuhlangana nomsebenzi wakho wokuzilibazisa, noma ngisho nokuzisunduzela ekubhekeni kahle kwengqondo. Kulesi sibonelo senhloso ye-SMART, sizobe sixoxa ngezinhloso ezihlobene nokuqina komzimba.
Ngakho-ke qala kuqala, lapho sithi izinjongo zokuqina ze-SMART, sisho ukuthini? Yebo, isifinyezo seSMART simele:
Ngokucacile - Yenza umgomo wakho wokuzivocavoca uqondakale kalula.
Inhloso ejwayelekile ivame ukuba banzi kakhulu, futhi lokho kuyenza ingafinyeleleki. Yisho ngqo, futhi izinhloso zakho kuzoba lula ukuzilawula. Isibonelo, uma ufuna ukwandisa isisindo osibulala, umgomo wakho ungaba "Ngizokhipha isisindo esithe xaxa."
Ukulinganiswa - Inhloso "yokubulala ngaphezulu" ayanele.
Uzoyilandela kanjani intuthuko yakho, futhi uzokwazi kanjani uma usufinyelele umgomo wakho? Ukwenza umgomo wakho ulinganiswe kusho ukufaka inombolo. Inhloso yakho kungaba ukuthi, "I will deadlift 100kg".
Kuyatholakala - Isinyathelo esisodwa ngasikhathi!
Kuhle 'ukushutha izinkanyezi,' kepha ungabi ngokweqisa ngokweqile. Ngokufanayo, umgomo olula kakhulu nawo awukhuthazi kakhulu. Uma udinga usizo kulokho ongakufinyelela, thintana nomqeqeshi noma umqeqeshi wakho. Isibonelo, uma ungakaze wenze into ebulala abantu ngaphambi kwalapho, akutholakali ukuzama ukuphakamisa u-100kg, qala ngokuqala ukwandisa isisindo osiphakamisayo ngo-5kg isonto ngalinye, futhi ekugcineni, uzohlangabezana nomgomo wakho.
Kuyafaneleka - Setha izinhloso ezenzelwe wena kuphela.
Izinhloso ze-Smart zenzelwe ukususa ingcindezi ngenkathi zisakugqugquzela, ngakho-ke ungazibekeli umgomo omunye umuntu okucindezela ukuthi uwufinyelele. Qiniseka ukuthi uhlelo lwakho luhambisana nenqubekela phambili yakho.
Kuboshwe isikhathi - Faka iphoyinti lokugcina.
Ukwazi ukuthi unesikhathi esinqunyiwe kukushukumisela ukuba uqale. Qala ukuphakamisa nokwandisa isisindo usuku nosuku. Uzozibona uzuza imisipha, futhi ekugcineni, uzokwazi ukufinyelela umgomo wakho!
Ungazibekeli imigomo eminingi kakhulu
Abantu abaningi bawela ogibeni lokusebenzisa unyaka omusha, inyanga entsha, isonto elisha njengendlela yokulungisa indlela yabo yokuphila ngokuphelele. Bafuna ukunciphisa isisindo, ukukhuphula inqwaba, ukusika ushukela, ukuzivocavoca kahlanu ngesonto, futhi uhlu luyaqhubeka. Uma uzibekela imigomo eminingi kakhulu, akunakwenzeka ukugxila kuyo yonke; yingakho kulula ukuthi abantu bawe enqoleni. Esikhundleni sokusabalalisa ukugxila kwakho phakathi kwezinhloso eziningi, kufanele ubeke yonke imizamo yakho kulokho ofuna ukukufeza kakhulu.
Bhala phansi izinhloso zakho
Elinye icebo lokuthi ungazibekela kanjani izinhloso zokuqina kwe-SMART ukuzibhala phansi. Ukubhalwa komgomo wakho ephepheni ngendlela ephathekayo kwenza kube unomphela. Kungakuhle uma ungabeka leli qweqwe lephepha endaweni ozoyibona khona, bese likukhumbuza lapho ufuna ukuba khona.
Dala uhlelo lokusebenza
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungasetha kanjani izinhloso zokuqina kwe-SMART, bese ubhala phansi uhlelo lokusebenza, kufaka phakathi imihlahlandlela yakho ye-SMART, umugqa wesikhathi, nezinhloso ezincane ezilinganisekayo ngaphakathi kohlelo lonke. Lokhu ngeke kukunikeze ukuqondiswa kuphela kepha nohlelo okufanele ululandele. Akugcini lapho, kepha kuzogqugquzela ukuthi ukwazi ukulandelela inqubekelaphambili yakho bese uphawula izinto lapho uhamba.
Njalo uhlolisise intuthuko yakho
Nganoma yimuphi umgomo, kubalulekile ukugcina umkhondo wentuthuko yakho. Ungadinga ukuguquguquka - kungadingeka ukuthi ubuyekeze izifiso zakho uma uhlangabezana nokubuyela emuva kokuqina. Thola indlela yokulandelela ukufaneleka kwakho ukuze ubone intuthuko yakho futhi ugcine umdlandla njengoba uqhubeka usebenza ufinyelela umgomo wakho. Uma uthanda ukuba nemivuzo nezikhumbuzi ezijwayelekile, zama ukusebenzisa umkhondo wokuzivocavoca umzimba ukurekhoda ukusebenza bese usetha izinhloso zakho zokuhamba zansuku zonke.
Ukuba inguqulo yakho yokufaneleka, enamandla, nenempilo kuqala ngokuba yi-SMART. Nquma ukuthi ufuna ukuzuza ini, ngasiphi isikhathi, bese usetha imigomo efanelekile yokufaneleka kulezi zinto. Kubaluleke kakhulu ukungahambisani nakho, futhi ekugcineni, uzozuza imivuzo yemizamo yakho.
Noma ngabe yini inhloso yakho yokuqina, uzoba sethubeni lokuyifeza uma ubeka imigomo emikhulu ye-SMART. Ukuhlanganisa imizamo yakho yokufaneleka nokuthatha izithasiselo kungakhulisa kakhulu imiphumela yakho.
Noma ngabe ufuna ukuba ngumakhi womzimba oqeqeshiwe noma umgijimi webanga elide, kuzodingeka uthathe izithasiselo ukuthola imiphumela oyifunayo. Njengoba kunezinhlobo eziningi zezithasiselo, kungcono ukuthi abasebenzisi bazi izinhlobo ezinhle kakhulu okufanele bazithathe nokuthi bazithatha kanjani ngokuphepha. Funda kabanzi mayelana nezinhlobo ezahlukahlukene zokungezelelwa lapha.
Ngabe ufuna izithasiselo futhi Ama-SAR? Sibathengisa bobabili! Uma uhlala e-UK, thenga nathi namuhla!
Ungahlukıselana Ephathwayo Pin it
← Iposi elidala Okuthunyelwe okusha →
Ungalithola Kanjani Ivelu Engaphezulu Kumjikelezo Wakho Wokwakha Umzimba
Mashi 31, 2021
Ungazinikeza Kanjani Izikhathi Zakho Zokuzivocavoca
Mashi 24, 2021
I-Alpha Labs Armistane
Mashi 18, 2021
American Express Apple Pay bancontact Bitcoin Club Diners I-EPS I-Giropay UDEAL I-JCB Maestro Mastercard Multibanco I-PayU Przelew24 SOFORT show Ukukhokha kwe-WeChat